कांग्रेसका कुन कुन चर्चित नेता कुन प्यानलबाट के के मा उम्मेदवारी - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार कांग्रेसका कुन कुन चर्चित नेता कुन प्यानलबाट के के मा उम्मेदवारी
पार्टीभित्र प्रभावशाली एवं चर्चित नेताहरूले फरक–फरक प्यानल बनाई उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन रोचक मोडमा पुगेको छ । प्रमुख सत्ताधारी दलसमेत रहेको यो पार्टीको शुक्रबारदेखि शुरु भएको १४औं महाधिवेशन राजधानीमा जारी छ ।
शनिबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यातालिकाअनुसार सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपाने गरी ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । पदाधिकारीका रूपमा रहने उपसभापति, महामन्त्री तथा सहमहामन्त्रीमा चर्चित नेताहरूले फरक–फरक प्यानलबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि कांग्रेस महाधिवेशन रोचक मोडमा पुगेको हो ।
प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उपसभापतिमा सुजाता कोइराला र महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने डा. शेखर कोइरालाको प्यानलबाट उपसभापतिमा धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारीले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । सोही प्यानलबाट महामन्त्रीमा गगन थापा र डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानलबाट उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदार र पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।
आफ्नो समूहमा एकमात्र साझा उम्मेदवार दिने प्रयास अन्तिम अवस्थासम्म पनि सफल हुन नसकेपछि नेता सिंहले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दै भन्नुभयो– ‘कांग्रेसलाई बलियो बनाएर लैजान र आउँदो स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको निर्वाचन जिताउन मेरो उम्मेदवारी हो । नेतृत्वको कमजोरीका कारण अघिल्लो निर्वाचनमा १ सय ६५ सिटमध्ये कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चनुपर्यो ।’ उहाँले देउवामाथि पार्टी पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिने आँटसमेत नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उम्मेदवारी घोषणासम्बन्धी अवधारणसमेत जारी गर्दै सभापति आकांक्षीका नेता सिंहले भन्नुभयो– ‘आउँदो चैत महिनाभित्र हुने स्थानीय निर्वाचन र आगामी मंसिरभित्र हुने प्रदेश र संघीय निर्वाचनको तयारीलाई अघि बढाउँदै पार्टी संगठन परिचालनमा केन्द्रित हुन्छु ।’ जीवन्त पार्टीभित्र पदका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुनु सामान्य कुरा भएको बताउँदै सिंह प्यानलका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सभापतिमा सिंहलाई विजयी गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सभापतिमा प्यानल हित उम्मेदवारी दर्ता गर्दै अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले युवाहरूको जोस र बूढाहरूको होसका साथ कांग्रेसलाई सशक्त ढंगले अघि बढाउने भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा आएका ५१ प्रतिशत युवाको साथ आफूलाई भएको बताउनुभयो । आगामी तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजयी गराउने प्रतिबद्धताका साथ डा. कोइरालाले यो महाधिवेशनपछि कांग्रेसको सर्वमान्य र आधिकारिक टिम आफ्नै हुने दाबी पनि गर्नुभयो ।
संस्थापनइतर पक्षबाट धेरै उम्मेदवार भएपछि पहिलो चरणमै जित हासिल गर्छु भनी हौसिएका शेरबहादुर देउवा गुटबाट विश्वप्रकाश शर्मा बाहिरिएपछि यो समूह सशंकित बनेको छ । पुनः नेतृत्व लिन उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि देउवाले भन्नुभयो– ‘मैले जित्छु ।’ कांग्रेसलाई बलियो बनाउन आफूले फेरि उम्मेदवारी दिएको बताउँदै देउवाले आगामी तीन चरणको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । देउवालाई समर्थन दिएका सिटौलाले देउवा प्यानलबाट आफ्नो समूहको नेता प्रदीप पौडेलले महामन्त्री र उमाकान्त चौधरीले सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
सभापतिसहित १३ पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्नेमा ३९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । कांग्रेस निर्वाचन समितिले जानकारी दिएअनुसार एक सभापतिका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने दुई उपसभापतिका लागि ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । दुई महामन्त्रीमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ८ सहमहामन्त्री पदमा २० जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
Previous articleरेखा पछि राजनीतिमा होमिए अर्का चर्चित कलाकार
Next articleदेउवा प्यानलबाट १२५ जनाको उम्मेदवारी (नामसहित)